UMangethe uzolingisa kuZalo
ULANGALAKHE Zwane uthole indawo ebalulekile kuZalo yokuba nguyise omncane kaSbonelo kanti uzovela kulona ngesizini yesithupha Isithombe: FACEBOOK / LANGALAKHE ZWANE
THOKOZANI NDLOVU | May 18, 2020
OWAYEMEMEZELA ukuhamba kwezitimela kuKhozi FM, uLangalakhe Zwane (63), usephinde wathola elinye ithuba lokulingisa njengoba esejoyine uZalo, kwiSABC 1.
UZwane odume ngoMangethe noqale ukuveza ikhono lakhe lokulingisa emdlalweni wethelevishini iMbewu: The Seed, ubabaza ukuchunywa yizinto esemdala.
Uthe useqalile ukuqopha kulo mdlalo kanti uzovela kwisizini yesithupha kuwona.
“Okungimangazayo ukuthi angizange ngiye ngisho ukuyofesa kodwa ngicelwe yibona aboZalo. Ngenxa yokuthi nakwiMbewu ngiyitoho angibanga nankinga. Bacele ukuthi ngenze inhlolokhono ngokubathumelela i-video engizishuthe kuyona ngidlala indawo yokuba wumkhongi. Ngivele ngacela indodakazi yami ukuthi ingilekelele ibe wumakoti ozokhongwa ngaziqopha ngenza lokhu abathi angikwenze. Akuphelanga ngisho amahora amabili ngibathumelele le video kuZalo, bangifonela bathi sebengithathile,” kusho uZwane.
Uthe ngokwenkontileka abamsayinise yona izophela ngo-Okthoba.
Echaza ngendawo ayilingisayo, uthe uzofika njengoyise omncane kaSbonelo (Wiseman Mncube).
“Njengobaba omncane ngizobe ngihola izingxoxo zamalobolo njengoba uSbonelo ezoyolobola. Kuningi okuzokwenzeka ngalo mlingisi, okunye kuyathusa. Ngenxa yokuthi akumele ngiveze izinto eziningi ngendawo engiyilingisayo, ngicela abantu balinde bazobhema bakholwe,” kuqhuba yena.
Uthe ukuya kwakhe kuZalo akuzophambana nokulingisa kwakhe kwiMbewu: The Seed, adlala kuyona indawo yenyanga ngoba ayikho inkontileka embophezele kulo mdlalo njengoba eyitoho.
Nyakenye uke waba nenhlanhla yokuqashwa ukuthi ayokwenza isikhangiso sethelevishini seDStv, eNamibia.
Bamlanda ngoba bebona intswebhu yokufana nomlingisi waseMelika, uMorgan Freeman, kanti vele kwakufuneka umuntu ofana naye.
Uthe nalokho kwamenza wagqama. Uqhuba athi lokho kwenza waba nesifiso sokuthi ahlanganiswe nalo mlingisi ngendlela abantu abakubabaza ngayo ukufana kwakhe naye.
Uthe kukhona abaze bathi kumele athole kahle ukuthi abukho yini ubuhlobo obukhona phakathi kwabo njengoba nezinto zenzeka ngendlela efanayo kubona, kwazise noMorgan Freeman waqala ukuduma ekulingiseni eseneminyaka engu-53 yobudala.